Netanyahu Oo Kulan Qarsoodi ah la Yeeshay Bin Salmaan-ka Sacuudiga. – Heemaal News Network
Warbaahinta Israa’iil ayaa sheegtay in Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu uu si qarsoodi ah ula kulmay dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan kaddib markii uu Axaddii booqasho ku tegay dalkaasi Sacuudiga.
Warbaahinta ayaa sidoo kale ku warramaysa in kulankaas uu goob joog ka ahaa xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeo.
Yoav Galant, wasiirka waxbarashada, oo waraysi siiyey Raadiyowga milatariga Israel ayaa yidhi “xaqiiqada la hubaa waa in kulankaasi dhacay. Waana arin wax ku ool ah xataa hadaan si rasmi ah loo shaacinin.”
Qoraal uu Twitter-ka soo dhigay, la taliyaha Netanyahu (Topaz Luk) ayaa u muuqday in uu sheegayo in kulan uu dhacay balse ma jiraan warar rasmi ah oo ku saabsan kulanka Netanyahu iyo Maxamed Bin Salmaan.
Maamulka Trump ayaa isku dayayay in Sucuudiga uu ka dhaadhiciyo inuu heshiis la galo Israa’iil kaddib markii qaar kamid ah dalalka carabta ay heshiis nabadeed la galeen Israa’iil kaas oo dib loogu soo celinayo xiriirkii kala dhexeeyay.
Siyaasiyiinta Xildoonka ah Waa Inay Amniga Ilaaliyaan” Wasiirka Amniga Somaliya.